ဖခင်တိုင်းသားကို ဒါလေးတွေ သင်ပေးပါ - Latest Myanmar News
ဖခင်တိုင်းသားကို ဒါလေးတွေ သင်ပေးပါ
July 3, 2019 Latest Myanmar News အချစ်နှင့်ရသ 0
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုကြီးပြင်းအောင်ပျိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာ မိခင်တွေကအဓိကကျတယ်လို့ အများကထင်နေကြပေမယ့် တချို့အကန့်တွေမှာတော့ ဖခင်တွေရဲ့ကွပ်ကဲမှုက ပိုအဓိကကျနေတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ကိုယ်မွေးထားတာက သားဖြစ်နေရင်ပေါ့။ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးကြည့်စမ်းပါ။မူကြိုအရွယ်ကတည်းက တောက်လျှောက်ကျောင်းတက်လာတာ ကျောင်းရဲ့90%က ဆရာတွေမဟုတ်ပဲ ဆရာမတွေဖြစ်နေတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့သွန်သင်မှုအောက်မှာပဲ ဒီကလေးကကြီးပြင်းလာရတယ်။အမျိုးသားရဲ့ သွန်သင်ပဲ့ပြင်မှုတွေရော လိုအပ်တယ်မထင်ဘူးလား?ယောင်္ကျားမှန်ရင်စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား?ယောင်္ကျားစိတ်ဓာတ်?အစရှိသဖြင့်ပေါ့…။အိုခေ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့သားကိုသင်ကြားပေးသင့်တဲ့အရာ6ခုကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ။
1.အောင်မြင်မှုဒဏ်၊ကျရှုံးမှုဒဏ်ကို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါ…!
ခက်ခဲတဲ့ကစားနည်းတွေသူနဲ့အတူလိုက်ဆော့ပေးရင်း အောင်နိုင်သူဖြစ်တဲ့အထိကြိုးစားဆော့ခိုင်းပါ။အနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ ဒီကစားနည်းကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မှုရဲ့အရသာကိုသိလာမယ့်အပြင် ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင် သူဘလောက်ထိစိုက်ထုတ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ သူမြင်လာပါလိမ့်မယ်။နောက် ကိုယ်စိုက်ထုတ်ပေမယ့် အနိုင်မရတဲ့ကစားပွဲတွေလိုပဲ ဘဝမှာလည်း ထင်မှတ်မထားတဲ့ကျရှုံးမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ကျရှုံးမှုအတွက်ရှက်နေစရာမလိုပဲ ရှေ့ဆက်သွားနေဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့အသိကို တပါတည်းရိုက်သွင်းပေးပါ။
မိခင်အနေနဲ့လည်း မိမိသားကို အမျိုးသမီးတွေကိုဘလိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားသွန်သင်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဖခင်ကပဲ မိမိဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများကို ပုံဥပမာထားပြီး သွန်သင်ပြသပေးနိုင်စွမ်းရှိသူပါ။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကို သူငယ်ချင်းဆီကမဟုတ်ပဲ၊အင်တာနက်ကမဟုတ်ပဲ ဖခင်ဆီကပဲ သင်ယူမှတ်သားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။မိခင်အတွက်ပန်းစည်းဝယ်ပေးဖို့ သူ့ကိုအတူခေါ်သွားပါ။စတိုးဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီး ငွေရှင်းကောင်တာကအမျိုးသမီးတွေကို ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတတ်အောင် သင်ပေးပါ။ဒါဆိုရင် သိပ်မရင်းနှီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆုံလာခဲ့သည့်တိုင် လေးစားသမှုနဲ့ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုတတ်နေမှာပါ။
အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ အချစ်နဲ့ကြုံလာရစမြဲဆိုတော့ ဝေခွဲရခက်၊ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာ သင့်ဆီကအကြံညဏ်တောင်းခံလာတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုအကောင်းဆုံး၊အဖြစ်သင့်ဆုံး အခြေအနေကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သားအနေနဲ့လည်း ဖခင်ဆီကသူ့ရဲ့အချစ်ဦး၊အချစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပုံအစရှိတဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များသာနားထောင်ခဲ့ရရင် သူ့အတွက်သိပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
ဖခင်ဟာ သားဖြစ်သူသန်မာဖို့၊ဘာကအမှန်တရားလဲဆိုတာသိပြီး ကိုယ့်ဟာကိုရပ်တည်နိုင်ဖို့၊မိမိကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံရွယ်သူတွေအနားမရောက်ခင်ကတည်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အစရှိတဲ့အကြောင်းကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆင်ခြင်ညဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ကျော်လွှားတတ်ဖို့ သင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသူပါ။ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်လိုသူတွေကို အာရုံထားနေတာထက် သူတို့ဘေးကနေရှောင်ခွာသွားတာအကောင်းဆုံးဆိုတာ သင်ပေးပါ။နောက် သူတစ်ပါးကိုကြင်နာညှာတာတာဟာ အားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိအောင်ရှင်းပြပါ။
ဒီနေရာမှာတော့ အထူးအထွေပြုလုပ်ပေးစရာမရှိသလို အချိန်နဲ့အချိန်စကားပြောပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ခံစားချက်တွေကို လိုက်ကန့်သတ်နေတာထက် ကိစ္စရပ်တစ်ခုတည်းမှာ အမျိုးမျိုးမြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို နားလည်စေပြီး လွတ်လပ်စွာဖွင့်ထားပေးပါ။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်းပြီးရလာတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို တန်ဖိုးထားပေးပါ။
နက်ခ်တိုင်ချည်ခြင်း၊မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေတကာယအတွက်အပြင် မီးပူတိုက်ခြင်းအစရှိတဲ့ အမှုကိစ္စတွေကိုလည်း မခြွင်းမချန်လုပ်တတ်အောင် သင်ပေးသင့်ပါတယ်။နောက် အမျိုးသားတွေလည်း ဟင်းချက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို ပုံဥပမာပြပြီး သင်ကြားပေးနိုင်တာ ဖခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့ အရေးကြုံလာရင် ဘသူ့ကိုမှပြေးအားကိုးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ကလေးငယျတဈယောကျကိုကွီးပွငျးအောငျပြိုးထောငျပေးတဲ့နရောမှာ မိခငျတှကေအဓိကကတြယျလို့ အမြားကထငျနကွေပမေယျ့ တခြို့အကနျ့တှမှောတော့ ဖခငျတှရေဲ့ကှပျကဲမှုက ပိုအဓိကကနြတေတျပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ကိုယျမှေးထားတာက သားဖွဈနရေငျပေါ့။ရိုးရိုးလေးပဲ တှေးကွညျ့စမျးပါ။မူကွိုအရှယျကတညျးက တောကျလြှောကျကြောငျးတကျလာတာ ကြောငျးရဲ့90%က ဆရာတှမေဟုတျပဲ ဆရာမတှဖွေဈနတေော့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့သှနျသငျမှုအောကျမှာပဲ ဒီကလေးကကွီးပွငျးလာရတယျ။အမြိုးသားရဲ့ သှနျသငျပဲ့ပွငျမှုတှရေော လိုအပျတယျမထငျဘူးလား?ယောကငြ်ျားမှနျရငျစောငျ့ထိနျးအပျတဲ့ကိုယျကငျြ့တရား?ယောကငြ်ျားစိတျဓာတျ?အစရှိသဖွငျ့ပေါ့…။အိုခေ ဒီတဈခါမှာတော့ ကိုယျ့ရဲ့သားကိုသငျကွားပေးသငျ့တဲ့အရာ6ခုကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ ။
1.အောငျမွငျမှုဒဏျ၊ကရြှုံးမှုဒဏျကို ဖွတျသနျးကြျောလှားတတျဖို့ အရေးကွီးတယျဆိုတာကို ရှငျးပွပါ…!
ခကျခဲတဲ့ကစားနညျးတှသေူနဲ့အတူလိုကျဆော့ပေးရငျး အောငျနိုငျသူဖွဈတဲ့အထိကွိုးစားဆော့ခိုငျးပါ။အနိုငျရဖို့ခကျခဲတဲ့ ဒီကစားနညျးကိုအပတျတကုတျကွိုးစားရငျး အောငျမွငျမှုရဲ့အရသာကိုသိလာမယျ့အပွငျ ဒီအခွအေနထေိရောကျအောငျ သူဘလောကျထိစိုကျထုတျခဲ့ရသလဲဆိုတာ သူမွငျလာပါလိမျ့မယျ။နောကျ ကိုယျစိုကျထုတျပမေယျ့ အနိုငျမရတဲ့ကစားပှဲတှလေိုပဲ ဘဝမှာလညျး ထငျမှတျမထားတဲ့ကရြှုံးမှုတှကွေုံလာတဲ့အခါမြိုးမှာ ကရြှုံးမှုအတှကျရှကျနစေရာမလိုပဲ ရှဆေ့ကျသှားနဖေို့ပဲလိုတယျဆိုတဲ့အသိကို တပါတညျးရိုကျသှငျးပေးပါ။
မိခငျအနနေဲ့လညျး မိမိသားကို အမြိုးသမီးတှကေိုဘလိုဆကျဆံသငျ့တယျဆိုတာ ညှနျကွားသှနျသငျပေးနိုငျပမေယျ့ ဖခငျကပဲ မိမိဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ဘဝအတှအေ့ကွုံမြားကို ပုံဥပမာထားပွီး သှနျသငျပွသပေးနိုငျစှမျးရှိသူပါ။အမြိုးသမီးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး အရေးကွီးတဲ့အကွောငျးအရာမှနျသမြှကို သူငယျခငျြးဆီကမဟုတျပဲ၊အငျတာနကျကမဟုတျပဲ ဖခငျဆီကပဲ သငျယူမှတျသားတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။မိခငျအတှကျပနျးစညျးဝယျပေးဖို့ သူ့ကိုအတူချေါသှားပါ။စတိုးဆိုငျကိုချေါသှားပွီး ငှရှေငျးကောငျတာကအမြိုးသမီးတှကေို ယဉျကြေးစှာပွောဆိုတတျအောငျ သငျပေးပါ။ဒါဆိုရငျ သိပျမရငျးနှီးတဲ့အမြိုးသမီးတှနေဲ့ဆုံလာခဲ့သညျ့တိုငျ လေးစားသမှုနဲ့ယဉျကြေးပြူငှာစှာ ပွောဆိုတတျနမှောပါ။
အခြိနျတနျအရှယျရောကျလာတော့ အခဈြနဲ့ကွုံလာရစမွဲဆိုတော့ ဝခှေဲရခကျ၊ဆုံးဖွတျရခကျတဲ့ကိစ်စမြိုးတှမှော သငျ့ဆီကအကွံညဏျတောငျးခံလာတဲ့ကိစ်စရပျမြိုးတှမှော သူငယျခငျြးတဈယောကျလိုအကောငျးဆုံး၊အဖွဈသငျ့ဆုံး အခွအေနကေို မီးမောငျးထိုးပွဖို့လိုအပျပါတယျ။သားအနနေဲ့လညျး ဖခငျဆီကသူ့ရဲ့အခဈြဦး၊အခဈြကိုတှရှေိ့ခဲ့ပုံအစရှိတဲ့ ကိုယျတှဖွေ့ဈရပျမြားသာနားထောငျခဲ့ရရငျ သူ့အတှကျသိပျတနျဖိုးရှိတဲ့လကျဆောငျတဈခုဖွဈမှာပါ။
ဖခငျဟာ သားဖွဈသူသနျမာဖို့၊ဘာကအမှနျတရားလဲဆိုတာသိပွီး ကိုယျ့ဟာကိုရပျတညျနိုငျဖို့၊မိမိကိုတိုကျခိုကျဖို့ကွံရှယျသူတှအေနားမရောကျခငျကတညျးက ကိုယျ့ကိုကိုယျကာကှယျနိုငျဖို့ အစရှိတဲ့အကွောငျးကိစ်စရပျမြားကိုလညျး ဆငျခွငျညဏျနဲ့ယှဉျပွီး ကြျောလှားတတျဖို့ သငျပေးနိုငျစှမျးရှိသူပါ။ကိုယျ့ကိုတိုကျခိုကျလိုသူတှကေို အာရုံထားနတောထကျ သူတို့ဘေးကနရှေောငျခှာသှားတာအကောငျးဆုံးဆိုတာ သငျပေးပါ။နောကျ သူတဈပါးကိုကွငျနာညှာတာတာဟာ အားနညျးခကျြမဟုတျဘူးဆိုတာကို သိအောငျရှငျးပွပါ။
ဒီနရောမှာတော့ အထူးအထှပွေုလုပျပေးစရာမရှိသလို အခြိနျနဲ့အခြိနျစကားပွောပေးဖို့ပဲလိုပါတယျ။သူ့ရဲ့အမွငျခံစားခကျြတှကေို လိုကျကနျ့သတျနတောထကျ ကိစ်စရပျတဈခုတညျးမှာ အမြိုးမြိုးမွငျလို့ရတယျဆိုတာကို နားလညျစပွေီး လှတျလပျစှာဖှငျ့ထားပေးပါ။သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံနဲ့ရငျးပွီးရလာတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို တနျဖိုးထားပေးပါ။
နကျချတိုငျခညျြခွငျး၊မုတျဆိတျရိတျခွငျး အစရှိတဲ့ တဈကိုယျရတေကာယအတှကျအပွငျ မီးပူတိုကျခွငျးအစရှိတဲ့ အမှုကိစ်စတှကေိုလညျး မခွှငျးမခနျြလုပျတတျအောငျ သငျပေးသငျ့ပါတယျ။နောကျ အမြိုးသားတှလေညျး ဟငျးခကျြတတျတယျဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို ပုံဥပမာပွပွီး သငျကွားပေးနိုငျတာ ဖခငျပဲဖွဈပါတယျ။အနညျးဆုံးတော့ အရေးကွုံလာရငျ ဘသူ့ကိုမှပွေးအားကိုးနစေရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ပိတောက်သားပုတီးဖြင့် စိပ်ရပါမည် ထီပေါက် ကံပွင့်၉ရက် ကျင့်စဉ်
ရေခဲတောင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ မစိမ့်ထက်အတွက် ရည်စူး၍ သူစုထားခဲ့သည့် မုန့််ဖိုးများဖြင့် တံတားဆောက်လှူမည်